Fifidianana 2018 : tsy ny vahoaka no matahotra fa ny mpitondra | NewsMada
Fifidianana 2018 : tsy ny vahoaka no matahotra fa ny mpitondra
Tsy tokony hatahotra fifidianana ny vahoaka, tsy maintsy hatao amin’ny 2018 ny fifidianana, tsy maintsy misy filoham-pirenena voafidy amin’ny 25 janoary 2019… Izany indray no voizin’ny mpitondra tato ho ato, hanamarinan-tena sy ibontsimbontsinana aza. Hatramin’izay, tsy ny mpitondra ve no tsy matoky tena amin’ny fifidianana? Tsy inona fa tahotra ny fitsaram-bahoaka amin’ny fandatsaham-bato.
Tahotra fiatrehana ny safidim-bahoaka, ohatra, ny tsy nanaovana fifidianana filoham-paritra sy filoham-paritany hatramin’izany. Manginy fotsiny ny hosoka sy hala-bato maharikoriko tamin’ny fifidianana kaominaly, 31 jolay 2015. Toy izany koa ny fanerena sy fandrahonana ary fividianana mpifidy vaventy tamin’ny fifidianana senatorialy, 30 desambra 2015. Izany no hoe tsy matahotra fifidianana?
Mbola tahotra fifidianana koa ny fitadiavana ny paipaika hikitihana ny lalàmpanorenana amin’izay mahametimety ny tena? Na handresena amin’ny fifidianana… Tsy matoky tena amin’ny fitsaram-bahoaka amin’ny latsa-bato noho ny tsy fahombiazam-pitantanana. Manana izay hambarany amin’izany ny vahoaka manoloana ny tsy fandriampahalemana lava, fidangan’ny vidim-piainana, ady sy fandrobana tany…
Miandry fifidianana ny vahoaka
Raha ny marina, ny vahoaka aza no tena miandry fifidianana, fa tsy hoe matahotra izany. Tsy misy hahazoany maneho hevitra, raha tsy amin’ny alalan’ny fandatsaham-bato: hanilihana ny mpitondra tsy mahatanteraka ny teny nomeny tamin’ny fampielezan-kevitra. Izay mitady hihetsika tsinona, potehina amin’ny fampiasana herim-pamoretana fa hoe manakorontana, manongam-panjakana.
Raha misy ny tahotry ny vahoaka, izay entina fa tsy mitondra: ny fanamparam-pahefana afitsoky ny isan-tsehatra sy isan’ambaratonga mba hahazoan’ny “kandidàm-panjakana” fandresena amin’ny fifidianana. Manomboka amin’ny mety tsy hahavoasoratra anarana ny tena ao anaty lisi-pifidianana izay, hatramin’ny mety hisian’ny hosoka sy hala-bato amin’ny voka-pifidianana: tsy zava-baovao.
Izany rehetra izany, ohatra, no mampiady mafy ny firaisamonina sivily momba ny fandrafetana ireo didy aman-dalàna mifehy ny fifidianana. Mbola ady hafa koa ny amin’ny ny fanajana sy fampiharana izany, indrindra ny fanasaziana izay manitsakitsakana azy. Iza no tena matahotra amin’izany?